Maitiro ekuburitsa kunze data kubva kune Hutano app | Ndinobva mac
Maitiro ekutumira kunze data kubva kuhutano Hutano
Zvichienderana neiyo mafomu kana zvishandiso zvaunoshandisa kuunganidza ruzivo nezve hutano hwako, iko kushanda Utano kubva ku iPhone yako inogona kuteedzera zviyero zvemuviri wako, kugwinya, hutano, hutano hwekubereka, kurara uye zvimwe zvakawanda. Iyi inzira huru yekuwana muongororwo wezinga rezviitiko uye hutano hwemuviri wedu zvakawandisa.
Tumira kunze kwako data rehutano
Nemenyu yekendendende tinogona kusarudza chero zuva uye kuona manhamba akarongwa pazasi. Uyezve, isu tinogona zvakare tumira kunze iyo yese data kubva kuHealth application, kungave kwekugovana neako wega mudzidzisi kana nachiremba. Ngatione maitirwo azvo.
Chekutanga pane zvese, vhura iyo app Utano, sarudza iyo tab "Hutano Dhata" mumenu yepasi, sarudza "Zvese" pamusoro pechinyorwa. Parizvino, ivo havagone kutengesa mhando dzakasiyana dze data zvakasiyana, zvinongokutendera iwe kutumira zvese zvese.
Iye zvino, mukona yepamusoro yekona yekona, shandisa «Share» icon.
Mune menyu inozoonekwa, pinda «Export», uye maitiro acho anotanga. Pachiratidziro iwe uchaona hwindo rine ngano «Kuburitsa data rehutano», zvingangotora chinguva saka iva nemoyo murefu.
Pakupedzisira, sarudza nzira yaunoda nayo tumira kunze Hutano data: unogona kusevha iyo .zip faira yakagadzirwa muDropBox, uitumire neMeyili, neshoko, zvichingodaro.
Uye zvakare, kune zvakare app inonzi QS Access uye Health Importer iyo shamwari yedu Manu akatiudza zvese zvakavanzika zvake pano uye izvo zvinoshandawo chaizvo zve tumira kunze Hutano data uyezve wozokwanisa kuzvirasa pane iPhone nyowani.
Usakanganwa izvozvo muchikamu chedu Tutorials Une zvaunazvo akasiyana siyana makuru matipi uye manomano kune ako ese Apple zvishandiso, zvishandiso uye masevhisi.
Nenzira, hauna kuteerera chikamu 18 cheApple Talkings parizvino?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Maitiro ekutumira kunze data kubva kuhutano Hutano
oscar perez akadaro
Iko hakuna app yeiyo data iyo inogona kuendeswa kune yangu Mac uye nekudaro ive nayo pamba pakombuta yangu.
Pindura kuna oscar perez
TrendForce Inoratidza Kuwedzera muMacBook Shipments
iTunes Unganidza debuts yetsika nharaunda yeva podcasters